Fanamboarana PCB - Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd.
Hainay tsara ny mamantatra ireo sombin-tsolika sarotra, 1-32 sosona PCB clone, layout PCB, PCB Assembly ary famokarana betsaka.
Mifantoka amin'ny famokarana PCBA avo lenta izahay, ary ho an'ny famokarana betsaka dia hanolotra fihenam-bidy izahay. Ny PCBA rehetra dia manana fe-potoana fiantohana herintaona.
Raha manana PCB hafa ambonin'ny sosona 6 ianao, toy ny sosona 8, sosona 10, sosona 16, sosona 18, sosona 28, azafady mba mifandraisa aminay, mahay mandika sy manome clone multilayer board izahay. Mahay ihany koa izahay amin'ny famoahana ny chip sarotra toy ny PIC16F1937, PIC16F1936, PIC16F1947, PIC24FJ64, PIC24HJ64, PIC18F25, EPM240, EPM570, EPM1270, STM, LPC, R5F, MB, NEC, MC, TMS, CY8C, AT91SAM, TMP sns.
Ny serivisinay matihanina sy tsara indrindra dia izao manaraka izao:
Fikirakirana PCB sy PCBA
Shenzhen Sichi Technology Co.LTD dia natsangana tamin'ny taona 2000.Mandray anjara mavitrika amin'ny 1-32 sosona PCB izahay, ny fikojakojana sy ny fampivoarana ny kojakoja ara-pitsaboana rehetra, ny fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy ary ny fitaovan'ny fifandraisana an-tariby. Izahay dia iray amin'ireo orinasa matanjaka sy manan-kery indrindra. miaraka amin'ireo orinasa toy ny serivisy fijanonana tokana amin'ny fivorian'ny PCB, kopian'ny PCB, clone PCB, triatra IC, famolavolana PCB, famoahana IC, famolavolana chip, fanodinana SMT, fanamboarana PCB, famokarana prototype ary fanafoanana.